Mampalahelo, Tena Mampalahelo Ny Toerana Misy Ny Rafi-Pitsaràna Ao India · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jona 2015 3:23 GMT
Roa volana lasa teo izay dia naresaka tety anaty media sosialy sy ny vaovao tao an-toerana ary ny tokantrano maro ny rafi-pitsaràna Indiana noho ny nanomezany didy famonjàna mandritry ny dimy taona ho an'ilay kintan'ny Bollywood Salman Khan tamin'ny raharaha fandosirana andraikitra taorian'ny loza nataony ny taona 2002.
Kanefa, andro roa taorian'ny fanapahankevitry ny fitsaràna, dia naaton'ny Fitsaràna Ambony ao Bombay ny saziny ary vetivety foana izy dia navotsotra rehefa nahaloa onitra, nahatonga ny sain'ny olona hitodika hijery ilay rafi-pitsarana izay matetika no noraisina ho tsy mangaraharaha, mitanila sy mihisatra, tena mihisatra — raha toa ianao tsy kintan'ny Bollywood.
Ndeha horaisintsika ny raharaha Machal Lalung, Indiana iray monina any amin'ny vohitr'i Silchang ao amin'ny fanjakàna Assam. Machal dia nandany 54 taona tany am-ponja Indiana, tsy nandalo fitsaràna na tsy mbola nisy aza vesatra anenjehana azy manokana.
Fa feno tantaran'olona izay tsy maintsy niandry ampolon-taona maro tany am-ponja ny mba hitsaràna azy ireo ny rafi-pitsaràna Indiana. Antony iray mahatonga ny fihemorana amin'ny fanaovana fitsaràna ny tsy fahampian'ny isan'ireo mpitsara — mpitsara 13 monja ho an'ny olona iray tapitrisa no ananan'i India raha oharina amin'ireo mpitsara 55 mahery isaky ny olona iray tapitrisa any Etazonia.
Ireo Indiana mpisolovava no mameno io fahabangàna io amin'ny alàlan'ny fitakiana fotoam-pitsarana mifanesisesy mba hakàna vola.
Fikambanana iray miahy tena, matianina, tsy manao politika ary tsy mikatsaka tombontsoa miorina ao Bangalore ny DAKHS , izay miasa manodidina ny tetikasa Fifehezan'ny lalàna mifantoka amin'ny raharaha iray nefa nentina taminà fitsaràna roa samihafa, sy ny fitarazohana any anatin'ny fitsaràna Indiana. Ao amin'ny bilaogin'ny DAKSH, manoratra i Kavya Murthy hoe:
Manerana ireo fitsarana Indiana rehetra, tany amin'ny faran'ny taona 2013 dia nisy tranga nihoatra ny 30 tapitrisa nisokatra tao amin'ny firenena.
Araka ny kajikajin'ny Bloomberg Businessweek, “raha toa ka mandray an-tànana tsy ankitsahatra ireo raharaha mitarazoka ao aminy ireo mpitsara ao amin'ny firenena – tsy misakafo sy tsy matory – ary mahavita tranga 100 isaky ny ora iray, dia maherin'ny 35 taona no ilaina hanenjehana an'izany.”
Pavan Kulkarni manoratra ao amin'ny India Together:
Araka ny Tatitra momba ny Antontanisan'ny Fonja tamin'ny faran'ny 2013, navoakan'ny Biraom-Pirenena Firaketana momba ny Heloka Bevava ao India, dia nisy 267.503 no fitambaran'ny voafonja miandry fitsaràna tao amin'ny firenena.
Ny fitambaran'ireo mpiara-mifonja dia 411.992, niakatra eo amin'ny 7% raha mitaha amin'ny tatitra teo aloha. Manana ny anjarany amin'ny fiakaran'ny isan'ireo efa any am-ponja, mihoatra noho izay zakany, ny tsy fahampian'ny fitsarana. Ny 2011, ny tahan'ny fampiasàna ny fonja dia 112.1% niakatra ho 112.2% ny 2012 ary 118.4% ny 2013. Ny famahànana ireo voafonja tsy mitsahatra mitombo ireo no mihinana ny tetibolan'ny firenena.
Na izany aza, rehefa tapaka ny fanohanana ara-bola ary nianjera ho any amin'ny governemantam-panjakana ny andraikitra, maro ireo “fitsarana malaky” no nikatona tsotra izao fotsiny ary araka ny nambaran'ny Ministeran'ny Lalàna sy ny Fitsarana, 976 monja no “fitsarana malaky” nanohy niasa tamin'ny Aogositra 2014. Na dia nampahafantarina aza fa nahavita niatrika raharaha maherin'ny 3,8 tapitrisa ireny “fitsarana malaky” ireny, mbola mitoetra hatrany ny fisalasalana momba ny kalitaon'ny didim-pitsaràna. Mijery ny raharaha momba ny heloka natao tamin'ny vehivavy sy ny ankizy ireo “fitsarana malaky” ireo ankehitriny, ary misy drafitra hametrahana ireny “fitsarana malaky” ireny misimisy kokoa, indrindra fa ao Delhi, izay 20 no andrasana hisokatra amin'ity taona ity.